Va Mugabe Vanobuda Munyika Chinyararire
Mapato eMDC maviri ari muhurumende yemubatanidzwa ne ZANU-PF ari kunyunyuta kuti seyi mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vakabuda munyika muchivande neMuvhuro vasina kuzivisa vamwe vavo muhurumende.
Gurukota muhofisi yaVa Tsvangirai, Va Jameson Timba, vaudza pepanhau re Daily News kuti havana kuudzwa kuti Va Mugabe vaenda kupi.
Ukuwo mutungamiri we MDC diki, Va Welshman Ncube, vari kutiwo hapana zvavari kuziva nezverwendo rwaVaMugabe.
VaMugabe vari kufungidzirwa kuti vaenda zvakare kuSingapore kunorapwa, kanova kechisere gore rino vachienda kunyika iyi.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko, Va George Charamba, varamba kutaura pamusoro penyaya iyi.
Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri we ZANU-PF, Va Rugare Gumbo. Asi mukokeri we ZANU-PF mudare reparamende, Va Joram Gumbo, vanoti kusavapo kwaVa Mugabe hakutadzisi hurumende kushanda basa rayo.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vachishanda samaneja mubazi re Democracy and Good Governance musangano re Institute for a Democratic Alternative for Zimbabwe – IDAZIM – Va Joy Mabenge, vanoti Va Mugabe vaifanira kutaurira vamwe vavo kuti vari kuenda kupi.